UTambo: Isithixo noma umholi wombangazwe - Bayede News
EMLANDWENI wezizwe nemiphakathi eyahlukehlukene, bakhona abaholi abamlando wabo ungagcini nje ngokuxoxwa yisizukulwane sabo kepha ogcina usungena ezibhebheni zomlando ufundwe yizizukulwane ezilandelayo. Endulo kunamagama abantu abafana no-Achilles, u-Alexadra the Great, uPlato, uSocrates, u-Aristotle, uPythogoras, uGenghis uKhan, uNapoleon, iNgonyama uShaka, iNdlovukazi uNdzenga, iKgosi uMoshoeshe nabanye abaningi. Ngezikhathi zombangazwe nakhona akhona amagama afana noKarl Marx, uVladimir Lenin, uLeon Trotsky, u-Eduardo Chivambo Mondlane, uNkwame Krumah, uJulius Nyerere, uJoshuia Nkomo , uThomas Sankara, uPatrice Lumbumba, uRobert Sobukwe, uSteve Biko, uWalter Sisulu, uNelson Mandela, uLilian Ngoyi nabanye.
Laba bantu bafika ngezikhathi ezimqoka esizweni nasemiphakathini yabo kuthi lokhu abakushilo noma abakuthintile kube ngokuvelele nokwenza kwezinye izindawo baphenduke izithixo okwenza kwazo kungelinganiswe nalutho noma namuntu, baba yizithixo okufungwa ngazo. NaseNingizimu Afrika ukhona umholi onjalo nowazalwa eminyakeni eyikhulu eyedlula.
Lowo ngumufi u-Oliver Reginald Kaizana Tambo. Le nsizwa yaseMampondweni igama layo liqoqa konke ngomzabalazo waboHlanga kuleli. Yize edlula emhlabeni eminyakeni engama-24 eyedlula, igama lakhe lisathathwa njengeli ‘ngcwele’ enhlanganweni ayihola iminyaka engama-30, i-African National Congress (ANC). Yize kunokuvumelana ekutheni uTambo wayelekelelwa ngabanye abaholi, okutuswa kakhulu yikhono lakhe lokukwazi ukuhola abantu abehlukene ezikhathini ezinzima.
Uyatuswa futhi nangekhono lakhe lokuba yinxusa lomzabalazo waboHlanga emazweni omhlaba. Lokhu wakwenza emuva kokuba abalingani bakhe okubalwa oMandela, uMhlaba, uSisulu nabanye baboshwa ngumbuso wobandlululo banikwa udilikajele. Akugcinanga lapho kepha namaqembu ombangazwe nawo avalwa umlomo. Lokhu kwathwalisa uTambo umthwalo wokungagcini nje ngokuqhakambisa umzabalazo waseNingizimu Afrika kepha wakwazi nokukhongela iqembu lakhe emazweni nasezinhlakeni zomhlaba njenge-United Nations (UN) ne-Organisation of African Unity (OAU) nezagcina seziba wudondolo lomzabalazo waboHlanga.
Isandla sokuphatha nogazi kukaTambo kakugcinanga ukubonakala ezinhlokodolobha zase-Europe nayilapho ayezinze khona kakhulu kepha kwakunjalo nasezinkanjini zebutho likaKhongolose, uMkhonto Wesizwe. Igama lakhe lalizwakala ngisho emaculweni naseziqubulweni zalabo ababeqeqeshwa emazweni ehlukene e-Afrika. Kwakunjalo ngisho emajele lapho izishoshovu zabe zivalelwe khona ngoba igama elithi; ‘Tambo’ labe lisho ukulwa ungaphezi, lisho ithemba lezwe elizayo, iNingizimu Afrika ekhululekileyo.
Namuhla uKhongolose uTambo achitha iminyaka yobusha bakhe ewuhola ubhekene nezinkinga eziningi. Lezi zinkinga cishe zikhonjwa kuyo yonke imikhakha yeqembu, kusuka kubalandeli emazikweni kuze kufike ebuholini bukazwelonke nakuzo izimpunga imbala ngoba nazo sezisodakeni lwalabo ababanga izikhundla. Omunye uzothi lokhu akukusha kuleli qembu eselineminyaka engaphezu kwekhulu. Iqiniso nangazo izikhathi zikaTambo zabe zikhona izinxushunxushu kwenye inkathi zimnetha kwayena nokwaqgama kakhulu ngesikhathi kunomhlangano oyisipesheli waleli qembu eMorogoro eTanzania ngowe-1969.
Kubaholi nakumalungu akhona namuhla kuKhongolose igama likaTambo lisetshenziswa ngezizathu ezahlukene. Abanye babaholi abasemcintiswaneni wezikhundla nababesondelene noTambo basebenzisa igama lakhe ngokuthi bamkhulumele ukuthi ‘okwenzekayo ngabe kumphatha kabi’ noma bathi le ‘ANC yanamuhla akuseyona ekaTambo’. Kanti labo abaphikisana nabo babakhumbuza ukuthi uTambo wayengelona ivukelambuso wayehlonipha izinqumo zeqembu ngisho enombono owehlukile, inqobo nje nxa kuyizinqumo zeningi’.
Ukugujwa kweminyaka eli-100 azalwa uTambo kufika ngesikhathi lapho iqembu lakhe sekusele nje isikhathi esiyinyanga liye engqungqutheleni emqoka abanye asebeqalile ukuyibiza ngeMorogoro yesibili. Kukhona abathi kuyokwehlukana inhloko nesixhanti, uKhongolose uphume usuyizincezu. Kanti kukhona, ikakhulukazi labo abadala, abasenethemba lokuthi njengoba kwaba njalo ngowe-1996 eMorogoro, uyoqhamuka onjengoTambo awelise uKhongolose kuleli zibuko elinzima.
Ekhuluma ngowe-1993 umlingani omkhulu kaTambo, uMandela wathi: “Ngithi uTambo akabhubhile, ngoba imicabango anikele ngayo impilo yakhe ngeke ize ife. Ngithi uTambo akabhubhile ngoba imicabango ngenkululeko, ngokuhlonipheka komuntu nokuhlonipha wonke umuntu ngale kombala ngeke ize ishabalale. Ngithi akabhubhile ngoba baningi phakathi kwethu ababeyingxenye yobuyena, ngakho-ke banguyena ngokuthanda kwabo emgudwini wokunqoba. Uma nje i-ANC isaphila, u-Oliver Tambo akakwazi ukufa!”
Kusesekuseni ukubuka ukuthi ngabe umhlangano we-ANC kaZibandlela uzoyibulala yini imisebenzi kaTambo noma cha. Okusobala nxa kubhalwa ngomlando kaTambo wukuthi iNingizimu Afrika ne-Afrika yaba nenhlanhla ngokuba nalesi sigomagoma somzabalazo. Okunye okucacayo wukuthi wayengazithathi njengonkulunkulwana womzabalazo kepha wayazi ukuthi uyingxenye yeviyo, okwakhe kwakuwukuhlakula lapho ayekhonjwe khona nokuyinto ayenza kahle. Kozakwabo akasona isithixo kepha uyisibonelo salokho umholi oqotho angakwenza emzabalazweni wabantu nempilo nje jikelele.
nguMfo waKwaNomajalimane Dec 21, 2019